Vonona hanome tanana ny Filoha amin’ny fampandrosoana ny firenena ny Diaspora any Frantsa. – Depeche TARATRA
Accueil/Politique/Vonona hanome tanana ny Filoha amin’ny fampandrosoana ny firenena ny Diaspora any Frantsa.
Henintsoa 23 août 2021
Niray feo nanamafy ny fahavononana hanolo-tanana ny Filoha Rajoelina Andry amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara ny teratany malagasy monina any Frantsa.
Io no fanambarana niombonan’ireo fikambanana maro any an-toerana nandritra ny fihaonana tamin’ny solon-tenam-panjakana maromaro, anisan’izany ny Minisitry ny raharaham-bahiny sy ny Filoha lefitry ny Antenimierampirenena misahana ny tapany avaratry ny nosy.
Mifanindrandalana amin’ny fanatrehan’ny Filoha ny fihaonana amin’ny mpandraharaha sy tompona orinasa ao Frantsa MEDEF na ny « Mouvement des entreprises de France » sy ireo tompona orinasa Frantsay ity fihaonana ity.
Tanjona ny hamondronana ny hevitra hahafana manatsara ny toekarem-pirenena sy ny fari-piainan’ny malagasy, eo koa ny famahana ny mety ho olan’ny teratany Malagasy any ivelany.
“Maro ny asa efa vita sy efa natomboky ny filoham-pirenena; anisan’ny efa misitraka izany ny mponina amin’ny faritanin’Antsiranana, andao hotohanana hatrany ny ezaka efa ataony”, hoy ny Filoha lefitry ny Antenimierampirenena misahana ny faritra avaratra, Joceline Maxime, tany Frantsa.
Atao izany fanentanana izany, hoy izy, mba ho fintsinjovana ny tombon-tsoa iraisana. Maro ny Malagasy monina any Frantsa tonga namonjy ny hetsika nokarakaraina omaly, izay samy nanamafy fa vonona hiara-hisalahy amin’ny ezaka ataon’ny mpitondra amin’izao fotoana izao.
Zandarimariam-pirenena: 29 mirahalahy notolorana medaly sy galona fankasitrahana
Vaccin Covid: les agents de santé et les personnes âgées d’abord
Le CFM sortira bientôt le numéro 3 du magazine Fihavanana
Fianovana sata: famotehana ny Paositra hoy ny sendika
Attentat contre le président : le ministre de la Défense réunit les chefs d’état-major